Boorash leh buluug iyo moos | Cunnooyinka jikada
Boorash boorash leh buluug iyo moos
Boorashka boorashka Iyagu waa, sidaad ogtahay, kuwa si joogto ah noo aqriya, mid ka mid ah quraacda aan jeclahay dhammaadka wiigga. Dhamaadka usbuuca markaan haysto waqtiga iyo xasilloonida lagama maarmaanka ah si aan ugu diyaariyo sidaan jeclahay. Iyo inaad ku raaxaysato iyaga oo aan deg deg ahayn, taas oo waliba muhiim ah.
Boorashyadan oo leh buluug iyo moos Miiskeyga ayey saarnaayeen Sabtidii lasoo dhaafay. Boorashku wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha ay ka kooban yihiin cabitaanka yicibta, qorfaha, kookaha iyo timirta. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin oo ay ku daraan miraha dusha sare ee kuwan aan si siman u fidnayn waana sababta ay dad badani u diidaan.
In kastoo aan isku dayay noocyo kale oo boorash ah - kuwa amaranth, iyo kuwo kale - oatmeal wali waa kan aan ugu jeclahay dhadhankiisa iyo sahlanaanta aan ku helayo maaddada ugu muhiimsan guriga. Saldhigga kuwan ayaa qiraya, marka lagu daro, lasocod badan, la ciyaar miraha aad ugu jeceshahay!
Boorashka boorashka leh buluugga iyo mooska ee aan maanta soo jeedinayo waa quraac aad u wanaagsan oo dhammaadka wiigga ah. Wanaagsan tahay buuxinta baytariyada.
1 koob oo ah cabitaanka yicibta
3 qaado oo jajabi ah oat flakes
½ qaado yar oo kookaha ah
Qanjiro ah nuxurka vanilj
3 ama 4 taariikhi ah
1 mooska oo yar
1 ounce shukulaato (ikhtiyaari ah)
Waxaan dhigeynaa digsi cabitaanka yicibta iyo miraha duudduuban si loo kululeeyo.
Marka isku darku bilaabmo inuu karkariyo, hoos u dhig kuleylka oo ku dar qorfaha, kookaha iyo timirta la shiiday. Waxaan isku darnaa oo aan ilaalinaa a isku kari ilaa 10 daqiiqo, Kareyso boorashka marba marka ka dambeysa si aysan ugu dhegin.
Inta boorashku karinayo, waxaan gooynay muuska jarjaran
10 daqiiqo kadib waxaan kusiineynaa boorashka boorashka baaquli iyo mooska ayaanu dul saaraynaa kuwaas, buluug iyo shukulaato.
Diyaar u ah in la cuno!
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka miraha leh » Boorash boorash leh buluug iyo moos
Maraq Lentil leh baradho macaan oo la dubay
Shukulaatada degdega ah iyo keega yicibta